पोखरामा डेंगुका विरामी बढ्दै , १२१ जनामा संक्रमण - Sabaithari.com
पोखरामा डेंगुका विरामी बढ्दै , १२१ जनामा संक्रमण
भदै ४, पोखरा ।
पोखरामा डेंगु संक्रमितको सङ्ख्या बढेर १२१ पुगेको छ । साउनपछि हालसम्म पोखराका विभिन्न अस्तपतालमा डेंगुका संक्रमित हुनेको संख्यामा बृद्धि भएको हो । गण्डकी मेडिकल कलेज, चरक मेमोरियल र फेवासिटी अस्पतालमा डेंगुका विरामीले उपचार गराई रहेको छन् भने केहि उपचार पछि घर फर्किएका छन् । पोखरा महानगरपालिको वडा नम्बर ८ वरपरबाट धेरै डेंगेको विरामी भेटिएका छन् । त्यस्तै बडा नंं ९, १० र १७ मा पनि डेंगुका बिरामी भेटिएको स्वास्थ्य निर्देशनालय गण्डकी प्रदेश कार्यालयका सूचना अधिकारी डा. भोजराज गौतमले जानकारी दिनुभयो । पोखरा वाहेक काठमाडौं , धरान , पर्बतका पनि बिरामी रहेको उहाँको भनाई छ ।
पोखरामा अहिले लामखुट्टेबाट हुने डेंगु रोग नियन्त्रण तथा रोकथामका लागि समुदाएमा अभियान चलाइएको छ । उहाँका अनुसार संक्रमित लामखुट्टेले टोकेपछि करिब ४८ घन्टाभित्र रगतमा भाइरस फैलिने गर्दछ । त्यही अवस्थामा अर्को लामखुट्टेले बिरामीलाई टोकेर स्वस्थ मानिसलाई टोके रोग सर्ने गर्दछ । लामखुट्टेले टोकेपछि रोगको लक्षण देखिन ३ देखि ४ दिन सम्म लाग्न सक्छ । पहिलोपटक संक्रमण फैलिएका ठाउँमा सामान्य रुघाखोकी र ज्वरोको लक्षण देखिने उहाँले बताउनुभयो । यसले घातक रूप लिँदा छाला, पेट, आन्द्राजस्ता शरीरका भित्री भागमा रक्तस्राव हुने र बिरामीको मृत्य समेत हुन सक्ने चिकित्सकको भनाई छ । लामखुट्टे पैदा हुन सक्ने स्थानहरु पहिचान गरी पानी जम्ने खाल्टाखुल्टी पुरेर यो रोगबाट बच्न सकिने डा. गौतमले बताउनुभयो ।
“आफै जिम्मेवारी भएर म हामी र हाम्रो भन्ने संझेर घर, आँगन, छरछिमेक र समुदायमा लामखुट्टेको बासस्थानलाई नष्ट गरेर लामखुट्टेको उत्पादन प्रक्रियालाई नै कम गरिदिन सके सजिलै यो रोगबाट वच्न सकिन्छ ।” उहाँले भन्नुभयो , यो रोगबाट बच्नको लागि हामीले सेल्फ प्रोटेक्सन गर्नुपरो । लामखुट्टे विहान र वेलुकीको समयमा एक्टिभ हुने भएकोले त्यो समयमा पुरा शरिर छोपिने गरि लुगा लगाउने , सुत्दा झुल टाँगेर सुत्ने, कोठामा जालि लगाउने गर्नु परो । ”
डेगुंको प्रकोप बढेसंगै गण्डकी प्रदेश सरकारले पनि विशेष सजकता अपनाएको छ । गण्डकी प्रदेशका सामाजिक बिकाश मन्त्री नरदेवी पुनले यसलाई रोकथाम गर्न जनचेतना फैलाउनुपर्ने कुरामा जोड दिदै महानगरसँग मिलेर अघि बढ्ने बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो ” यसलाई ध्यान दिनको निम्ती चेतनामुलका अभियान नै चलाउनु परो । नागरीकले यसलाई थाहा पाउनुपरो । पहिलो कुरा त यसलाई स्थानिय सरकारले नेतृत्व लिन जरुरी छ , त्यसपछि त्यसको सपोर्टमा प्रदेश सरकार जान जरुरी छ । अहिले प्रदेश सरकार महानगरसँग छलफल गरेर अगाँडि बढेको छ । ”
अहिले लामखुट्टेको सिजन छ । बर्खायाम पानी जताततै जमेको हुन्छ । डेंगु सार्ने लामखुट्टेको विकास हुन सक्ने भएकोले आम नागरीक आफु स्वयम पनि सचेत हुन जरुरी देखिन्छ ।